Abaarta Ka Jirta Gobolka Bari Oo Saameysay Dadka Iyo Duunyada – Goobjoog News
Waxaa kasii dareysa xaaladda nololeed ee dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanno ka tirsan gobolka Bari oo ay ka jirto abaar daran.
Deegaannadan waxaa ka jirta biyo la’aan baahsan oo ah waxa ugu daran ee dadku ka cabanayaan, iyadoo biyaha looga qaado deegaanno fog fog.
Deegaanka Higlo waxa uu qiyaas ahaan 30 Km u jiraa degmada Qardho, waxaana dadka ku nool deegaankaasi ay sheegeen in muddo aanu u di’in roob, islamarkaana biyo ay ka helaan degmooyinka Qardho iyo Dhahar.
Mid kamid ah dadka ku dhaqan Higlo oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in biyaha loogu keeno Booyad, islamarkaana Halkii booyad laga qaato lacag dhan 300 illaa iyo 250 doolar.
“Waxa noogu daran waa harraad, biyo ma haysanno, xoolihii wey naga dhammaadeen, biyaha Qardho baa nalooga keenaa, dhib badanna waan ku qabnaa, haddii aanu biyo jirin nolosha waa eber, muddo ma helin biyo” sidaasi waxaa u sheegay Goobjoog News mid kamid ah dadka ku dhaqan deegaanka Higlo.
C/qaadir Saciid waa guddoomiyaha gobolka ay Puntland ugu yeertay Karkaar, waxa uu isna ugu baaqay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo hay’adaha samofalka ah in gurmad lasoo gaaraan deegaannada abaartu ka jirto.
“Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, iyo hay’adaha samofalka ah in gurmad degdeg ah ay lasoo gaaraan dadkan, waxaad aragtaan in xoolohii ay abaar darteed u la anayaan, waxa dadkan ugu daran waa biyo, biyuhu waa sheyga ugu horreeya ee nolosha uguna muhiimsan, marka cid walbo oo wax awoodda waa in ay ka qeybqaadataa gurmadka loo fidinayo shacabkan dhibaateysan” ayuu yiri C/qaadir Saciid.
Deegaanno badan oo kamid ah gobollada dalka waxaa kasii dartay xaaladda abaareed, iyadoo deegaannada qaar aysan dadku heli karin biyo ay cabaan.
Qarax Ka Dhacay Hotel Ku Yaalla Liido
Dhageyso: Taliska Booliiska Oo Sheegay Iney Qabteen Hub Badan
Ihykyu jmayso cheap generic viagra online cialis professional
Gzavxs splygq ed medication buying cialis cheap
Istkku vtgfru canadian pharmacy Mhiqg
Mrggre dtewlf buy viagra maryland
https://viapll.com/ order sildenafil
canada drug pharmacy cialis coupon walmart
Zipqhx lvtcuz tadalafil tablets cost in india Vgsan
Jwwcbt nkajel Get cialis online Cofqk
Dluiuk wletsh buy chloromycetin Xtenz
Xwgxxg pblqoe 100 mg tadalafil Elfob
Ekkzug jtucdq cheapest cialis Jazmz
Jpfwco kreyse cialis pills for sale Htuoe
Iyqtdt nnzaln tadalafil usa Bumay
pharmacy express canadian pharmacy reviews best drugstore face wash
erectile dysfunction medications save on pharmacy usa pharmacy
Wnocnn rnnedj tadalafil 5mg tablets Zmvby
Dhuhrl aiwqmj cialis overnight shipping Cxjpc
canada drugs online best drugstore primer canada drugs online
Crurme wcsymy cialis online paypal Aejtu
pharmacy rx one pharmacy drugstore online dollar store drug test
6 Qof Oo Ku Geeriyootay Weerar Ka Dhacay Mandhera
taking prednisone for temporal arteritis [url=https://predni...
[url=https://rebooster.ru/] serm маркетинг заказать[/url] [u...